Amos 8 AKCB - Matteus 8 LB
Kɛntɛn A Aduaba A Abere Wɔ Mu
1Afei nea Otumfo Awurade yi kyerɛɛ me ni: kɛntɛn a aduaba a abere wɔ mu. 2Obisae se, “Dɛn na wuhu, Amos?”
Mibuae se, “Kɛntɛn a wɔde nnuaba a abere ahyɛ no ma.”
Na Awurade ka kyerɛɛ me se, “Me nkurɔfo Israelfo bere no aso; meremfa wɔn ho nkyɛ wɔn bio.”
3Sɛnea Otumfo Awurade se ni, “Saa da no, hyiadan nnwonto bɛdan agyaadwotwa. Wɔbɛbɔ afunu bebree apete baabiara! Enti yɛ komm!”
4Muntie saa asɛm yi, mo a mutiatia mmɔborɔfo so,
na mopam ahiafo fi wɔn asase so,
5na moka se,
“Bere bɛn na ɔsram foforo betwa mu
ama yɛatɔn aduan,
na Homeda bɛba awiei
ama yɛadi awi gua?”
Sɛ mobɛhyɛ susukoraa mu
na moatoto ɔbo so
na mode nsania a wɔamia mu asisi atɔfo,
6na mode dwetɛ atɔ ahiafo
na mmɔborɔfo nso moatɔn wɔn agye mpaboa,
na moapra awi ase afra awi mu atɔn.
7Awurade de Yakob ahohoahoa aka ntam se: “Me werɛ remfi biribiara a wɔayɛ da.
8“Asase renwosow wɔ nea asi yi ho ana,
na wɔn a wɔte mu nyinaa rentwa adwo ana?
Asase no nyinaa bɛma ne ho so te sɛ Nil8.8 Yiri tɛnn te se Nil: Osu a ɛtɔ bere ano bere ano wɔ Etiopia no ma Asubɔnten Nil a ɛwɔ Misraim yiri bu fa so bɛyɛ anammɔn 25 ma ne subon no yɛ ma. Nsuyiri yi soa dɔte pa kogu asase no so.
ebubu afa so, na asan atwe bio
te sɛ Misraim asubɔnten.”
9Sɛnea Otumfo Awurade se ni,
“Saa da no, mɛma owia atɔ owigyinae,
na mama sum aduru asase so awia ketee.
10Mɛdan mo nyamesom aponto ama ayɛ awerɛhowdi
na mo nnwonto nyinaa adan osu.
Mɛma mo nyinaa afura atweaatam
na mayi mo tinwi.
Mɛyɛ saa da no te sɛ ɔba koro ho awerɛhowdida
na awiei no ayɛ sɛ da a ɛyɛ nwen.
11“Nna no reba” sɛnea Otumfo Awurade se ni,
“Mɛma ɔkɔm aba asase no so,
ɛnyɛ aduankɔm anaa osukɔm,
na mmom, Awurade asɛm ho kɔm.
12Nnipa bɛtɔ ntintan akyinkyin afi po so akɔ po so,
na wɔakyinkyin afi atifi fam akɔ apuei fam,
sɛ wɔrekɔhwehwɛ Awurade asɛm,
13“Na saa da no
“mmabaa ahoɔfɛfo ne mmarimaa ahoɔdenfo
bɛtotɔ beraw esiane osukɔm nti.
14Wɔn a wɔde Samaria aniwu abosom ka ntam,
anaa wɔde Dan ne Beer-Seba abosom ka ntam no,
wɔbɛhwehwe ase na wɔrensɔre bio.”
AKCB : Amos 8